मण्डलीको जीवन र वास्तविक जीवनको 'boutमा छलफल | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्दा, व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई वास्तविक जीवनमा ल्याउनुपर्छ भनेर किन भनिन्छ? मानिसलाई रूपान्तरण गर्ने मण्डली जीवन मात्रै होइन; अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, मानिसहरू वास्तविक जीवनमा नै वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुपर्दछ। तिमीहरू वास्तविक जीवनमा धेरै थोकहरूको अभ्यास गर्न बेवास्ता गर्दै, र तिनीहरूमा तिमीहरूको प्रवेशलाई उपेक्षा गर्दै सधैँ आफ्नो आत्मिक स्थिति र आत्मिक कुराको बारेमा कुरा गर्थ्यौ। तिमीहरू प्रत्येक दिन लेख्थ्यौ, तिमीहरू प्रत्येक दिन सुन्थ्यौ, र तिमीहरू प्रत्येक दिन पढ्थ्यौ। तिमीहरूले खाना पकाउँदै गर्दा पनि तिमीहरू यसो भन्दै प्रार्थना गर्थ्यौ: “हे परमेश्‍वर! तपाईं मभित्रको मेरो जीवन बन्नुहोस्। तर आजको दिन बित्दा, कृपया मलाई आशिष् दिनुहोस् र मलाई ज्ञान दिनुहोस्। तपाईंले आज मलाई जुन कुराको ज्ञान दिनुहुन्छ, कृपया मलाई यो क्षणमा त्यसबारे बुझाउनुहोस्, यसैले कि तपाईंका वचनहरूले मेरो जीवनको रूपमा काम गरून्।” तैंले बेलुकीको भोजन खाइरहँदा पनि यसरी पनि प्रार्थना गर्थिस्: “हे परमेश्‍वर! तपाईंले हामीलाई यो भोजन दिनुभयो। तपाईंले हामीलाई आशिष् दिनुहोस्। आमेन! हामी तपाईंसँग जिउन सकौं। तपाईं हामीसँग हुनुहोस्। आमेन!” तैंले आफ्नो भोजन खाइसकेपछि र भाँडा माझेपछि तँ बरबराउन थालिस्: “हे परमेश्‍वर, म यो कचौरा हुँ। हामी शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएका छौं र प्रयोग गरिएका कचौराहरू जस्ता छौं जसलाई पानीले सफा गर्नैपर्छ। तपाईं त्यो पानी हुनुहुन्छ, र तपाईंका वचनहरू जीवित पानी हो, जसले मेरो जीवनका लागि आपूर्ति गर्दछ।” तैंले थाहा नपाई ओछ्यानमा जाने समय भएको हुन्थ्यो, र तँ फेरि बरबराउन थालिस्: “हे परमेश्‍वर! तपाईंले मलाई दिनभरि आशिष् दिनुभयो र मलाई डोऱ्याउनुभयो। म तपाईंप्रति साँच्चै आभारी छु।…” तैंले आफ्नो दिन यसरी बिताइस्, र त्यसपछि तँ आफ्नो निद्रामा परिस्। प्रायः मानिसहरू दैनिक रूपमा यस्तै जीवन बिताउँछन्, र अहिले पनि उनीहरूले वास्तविक प्रवेशलाई बेवास्ता गर्दछन्, उनीहरूका प्रार्थनाहरूमा ओठे सेवा गर्नुमा मात्र ध्यान दिन्छन्। यो उनीहरूको पहिलेको जीवन हो—उनीहरूको पुरानो मनुष्यत्व। अनि धेरै जना यस्तै प्रकारका छन्; उनीहरूमा कुनै वास्तविक तालिमको अभाव हुन्छ, र उनीहरू अत्यन्तै थोरै वास्तविक रूपान्तरण हुँदछ। उनीहरू आफ्ना प्रार्थनाहरूमा ओठे सेवा मात्र चढाउँछन्, उनीहरू बोलीले मात्र परमेश्‍वरको नजिक हुन्छन्, तर उनीहरूको बुझाइमा गहिराइ हुँदैन। हामी यो अति साधारण उदाहरणलाई लिऊँ—तेरो घर सफा राख्ने बारेमा। तैंले आफ्नो घर लथालिङ्ग देख्छस्, त्यसैले तँ त्यहाँ बस्छस् प्रार्थना गर्छस्: “हे परमेश्‍वर! शैतानले ममाथि हालेको भ्रष्टता हेर्नुहोस्। म यो घरजस्तै फोहोर छु। हे परमेश्‍वर! म साँच्चै तपाईंको प्रशंसा गर्दछु र तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईंको मुक्ति र ज्ञानविना मैले यो वास्तविकतालाई बुझ्‍नेथिइनँ।” तँ त्यहाँ बस्छस् र लामो समयसम्म प्रार्थना गर्दै बरबराउँछस्, र त्यसपछि तँ केही नभएको जस्तो व्यवहार गर्छस्, मानौं तँ अलमल्ल परेकी एक वृद्ध महिला होस्। वास्तविकतामा अलिकति पनि प्रवेश नगरी, धेरै वटा देखावटी अभ्यासहरू गर्दै आफ्नो आत्मिक जीवन बिताउँछस्! वास्तविक तालिममा प्रवेश गर्ने कार्यमा मानिसहरूका वास्तविक जीवन र उनीहरूका व्यावहारिक कठिनाइहरू समावेश हुन्छ—तिनीहरू परिवर्तन हुने एक मात्र तरिका यही हो। वास्तविक जीवनविना, मानिसहरू रूपान्तरण हुन सक्दैनन्। प्रार्थनामा ओठे सेवा गरेर के फाइदा हुन्छ र? मानिसको प्रकृतिलाई नबुझी, सबै कुरा समयको बरबादी हो, र अभ्यास गर्ने मार्गविना, सबै प्रयास व्यर्थ हुन्छ! सामान्य प्रार्थनाले मानिसहरूलाई भित्री रूपमा आफ्नो सामान्य अवस्था कायम राख्न सहायता गर्दछ, तर तिनीहरू यसद्वारा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन्। मानव स्व-धार्मिकता, अहङ्कार, घमण्ड, सेखीलाई चिन्नु र मानिसका भ्रष्ट स्वभावहरू जान्नु जस्ता कुराको ज्ञान प्रार्थनाद्वारा आउँदैन—परमेश्‍वरको वचन चाखेपछि मात्र तिनको बारेमा थाहा पाइन्छ, र वास्तविक जीवनमा पवित्र आत्माले दिनुहुने ज्ञानद्वारा मात्र तिनको बारेमा जान्न सकिन्छ। आजभोलिका सबै मानिसहरू राम्ररी बोल्न सक्छन्, र उनीहरूले सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रचार सुनेका हुन्छन्—युगौं-युगको अवधिमा अरू सबैले दिएकोभन्दा उच्च—यद्यपि त्यसको थोरै भागलाई मात्र उनीहरूको वास्तविक जीवनमा लागू गरिन्छ। भन्नुको तात्पर्य, तिनीहरूको वास्तविक जीवनमा परमेश्‍वर हुनुहुन्न; रूपान्तरणपछि तिनीहरूमा नयाँ व्यक्तिको जीवन हुँदैन। वास्तविक जीवनमा तिनीहरू सत्यतामा जिउँदैनन्, न त तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई नै वास्तविक जीवनमा ल्याउँछन्। तिनीहरू नरकका सन्तान जस्तो भएर जिउँछन्। के यो स्पष्ट देखिने विचलन होइन र?
सामान्य व्यक्तिको स्वरूपलाई पुनर्स्थापित गर्न, अर्थात्, सामान्य मानवता हासिल गर्नको लागि, मानिसहरूले केवल उनीहरूको वचनद्वारा मात्र परमेश्‍वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन्। त्यसो गरेर तिनीहरू आफ्नै हानि मात्र गर्छन्, र यसले तिनीहरूको प्रवेश वा रूपान्तरणमा फाइदा गर्दैन। त्यसकारण, रूपान्तरण प्राप्त गर्न, मानिसहरूले अलिअलि गर्दै अभ्यास गर्नुपर्छ। तिनीहरू बिस्तारै प्रवेश गर्नुपर्छ, अली-अली गर्दै खोज्नु र पत्ता लाउनुपर्छ, सकारात्मक भएर प्रवेश गर्नुपर्दछ, र सत्यको व्यावहारिक जीवन; एक सन्तको जीवन जिउनुपर्छ। त्यसपछि, वास्तविक थोकहरू, वास्तविक घटनाहरू, र वास्तविक वातावरणले मानिसहरूलाई व्यावहारिक तालिम दिन्छ। मानिसहरूले ओठको सेवा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन; यसको सट्टा, तिनीहरूले वास्तविक वातावरणमा तालिम लिनुपर्छ। मानिसहरूले पहिले उनीहरूमा अति थोरै क्षमता छ भनी थाहा पाउँछन् र त्यसपछि उनीहरूले सामान्य रूपमा परमेश्‍वरका वचनहरू खान्छन् र पिउँछन्, सामान्य रूपमा प्रवेश गर्छन् र अभ्यास गर्छन्; यसरी मात्र उनीहरूले वास्तविकता प्राप्त गर्न सक्दछन्, र यसरी नै प्रवेश अझ तीव्र गतिमा आउन सक्छ। मानिसहरूलाई रूपान्तरण गर्नको लागि, केही व्यावहारिकता हुनुपर्दछ; तिनीहरूले वास्तविक थोकहरू, वास्तविक घटनाहरू, र वास्तविक वातावरणमा अभ्यास गर्नुपर्छ। के एक व्यक्तिले मण्डलीको जीवनमा मात्र निर्भर भएर साँचो तालिम लिन सक्छ? के मानिसहरू यस्तो प्रकारले वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्छन्? सक्दैनन्! यदि मानिसहरू वास्तविक जीवनमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् भने, तिनीहरू आफ्नो पुरानो जीवनशैली र काम गर्ने पुराना तरिकाहरू रूपान्तरण गर्न सक्दैनन्। यो पूर्ण रूपमा मानिसहरूको आलस्य र धेरै परानिर्भरताका कारणले होइन, तर यसको कारण के हो भने, मानिसहरूसँग जिउने क्षमता छैन, र यसको अतिरिक्त, उनीहरूलाई सामान्य व्यक्तिको स्वरूपको सम्बन्धमा परमेश्‍वरको मापदण्डको ज्ञान छैन। विगतमा, मानिसहरू जहिल्यै पनि कुरा गर्दथे, बोल्थे, कुराकानी गर्थे—र तिनीहरू “वक्ता” समेत बने—तापनि उनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो जीवनको स्वभावमा रूपान्तरणको खोजी गरेनन्; यसको सट्टा, तिनीहरूले अन्धाधुन्ध गहन सिद्धान्तहरूको खोजी गरे। यसैले, आजका मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास गर्ने धार्मिक शैली परिवर्तन गर्नुपर्दछ। तिनीहरूले एउटा घटना, एउटा थोक, एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित भएर अभ्यासमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। तिनीहरूले ध्यान दिएर यो गर्नुपर्छ—तब मात्र तिनीहरूले परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन्। मानिसहरूको रूपान्तरण तिनीहरूको सारको परिवर्तनबाट सुरु हुन्छ। त्यो कामको लक्ष्य मानिसहरूको सार, तिनीहरूका जीवन, र तिनीहरूको आलस्य, परानिर्भरता, र दासत्वमा लक्षित हुनुपर्दछ—यस तरिकाले मात्र उनीहरू रूपान्तरण हुन सक्छन्।
मण्डलीको जीवन केवल एउटा यस्तो प्रकारको जीवन हो जहाँ मानिसहरू परमेश्‍वरको वचनको स्वाद लिन भेला हुन्छन्, र यसले व्यक्तिको जीवनको सानो भागलाई मात्र निर्माण गर्छ। यदि मानिसहरूको सामान्य जीवन—सामान्यतया परमेश्‍वरका वचनहरूको स्वाद लिँदै, प्रार्थना गर्दै र सामान्यतया परमेश्‍वरसँग नजिक हुँदै, सबै कुरा परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार गरेर वास्तविक जीवन जिउँदै, सबै कुरा परमेश्‍वरको सत्यताअनुसार गरेर वास्तविक जीवन जिउँदै, प्रार्थनाको अभ्यास गर्ने र परमेश्‍वरको सामु शान्त रहन अभ्यास गर्ने वास्तविक जीवन जिउँदै, भजनहरू गाउने र नाच्‍ने जस्ता कार्य अभ्यास गर्दै जिउने गरिएको सामान्य आत्मिक जीवन लगायत—तिनीहरूको मण्डलीको जीवन जस्तै हुन सक्यो भने त्यस किसिमको जीवनले मात्र तिनीहरूलाई परमेश्‍वरको वचनको जीवनमा ल्याउनेथियो। धेरैजसो मानिसहरूले मण्डलीदेखि बाहिरको जीवनलाई “परवाह” नगरी उनीहरूको मण्डली जीवनका कैयौं घण्टाको समयलाई मात्र ध्यान दिन्छन्, मानौं बाहिरको जीवनसित तिनीहरूको कुनै सरोकार छैन। त्यहाँ त्यस्ता धेरै मानिसहरू पनि छन् जो परमेश्‍वरका वचनहरू खाउँदा र पिउँदा, भजनहरू गाउँदा, वा प्रार्थना गर्दा मात्र सन्तहरूको जीवनमा प्रवेश गर्छन्, त्यसपछि ती समयदेखि बाहिरका समयमा उनीहरू आफ्‍ना पुरानो स्वभावमा फर्कन्छन्। यस प्रकारले जियाइले मानिसहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन, तिनीहरूलाई परमेश्‍वर चिन्‍ने तुल्याउनु त परको कुरा हो। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेर, यदि मानिसहरू आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, भने उनीहरूले आफैलाई वास्तविक जीवनबाट अलग गर्नुहुँदैन। वास्तविक जीवनमा तैँले आफैलाई चिन्नुपर्छ, आफैलाई त्याग्नुपर्छ, सत्यको अभ्यास गर्नुपर्छ, साथै बिस्तारै रूपान्तरण हासिल गर्नुभन्दा अघि तैँले सबै कुरामा आत्म-आचरणका सिद्धान्तहरू, सामान्य ज्ञान र नियमहरू सिक्नुपर्दछ। यदि तैँले सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छस् र वास्तविकताको गहिराइमा नपसी, वास्तविक जीवनमा प्रवेश नगरी केवल धार्मिक विधिविधानहरूमा मात्र जिउँछस् भने तँ वास्तविकताभित्र कहिल्यै पनि प्रवेश गर्नेछैनस्, तैँले आफैलाई, सत्यतालाई वा परमेश्‍वरलाई कहिल्यै जान्नेछैनस्, र तँ सदासर्वदा अन्धो र अज्ञानी हुनेछस्। मानिसहरूलाई मुक्ति दिने परमेश्‍वरको कार्य तिनीहरूलाई थोरै समयपछि सामान्य मानवीय जीवन बिताउन दिनु होइन, न त उनीहरूका गलत धारणा र सिद्धान्तहरूलाई रूपान्तरण गर्नको लागि नै हो। बरु, उहाँको उद्देश्य मानिसहरूको पुरानो स्वभाव परिवर्तन गर्नु, उनीहरूको पुरानो जीवनशैलीलाई पूर्ण रूपमा बदल्नु, र तिनीहरूको पुरानो सोच र मानसिक दृष्टिकोणलाई बदल्नु हो। केवल मण्डलीको जीवनमा ध्यान केन्द्रित गरेर मात्रै मानिसहरूका पुरानो जीवनका बानीहरू परिवर्तन हुँदैनन् वा उनीहरू लामो समयदेखि बाँचेको पुरानो तरिकाहरू परिवर्तन हुँदैनन्। जे भए पनि, मानिसहरू वास्तविक जीवनबाट अलग हुनुहुँदैन। मानिसहरूले मण्डलीको जीवनमा मात्र होइन, तर वास्तविक जीवनमा समेत सामान्य मानव जीवन जिऊन् भनी परमेश्‍वरले आग्रह गर्नुहुन्छ; तिनीहरूले मण्डलीको जीवनमा मात्र होइन, तर वास्तविक जीवनमा समेत सत्यतामा बाँचून्, र तिनीहरूले मण्डलीको जीवनमा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा समेत आफ्ना कार्यहरू पूरा गरून्। वास्तविकतामा प्रवेश गर्नका लागि, व्यक्तिले सबै थोकलाई वास्तविक जीवनतर्फ मोड्नुपर्छ। यदि, परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेर, वास्तविक जीवनमा प्रवेश गरेपछि मानिसहरूले आफैलाई चिन्न सक्दैनन्, र यदि तिनीहरू वास्तविक जीवनको सामान्य मानवतामा जिउन सक्दैनन् भने तिनीहरू असफल बन्नेछन्। परमेश्‍वरको आज्ञा पालन नगर्नेहरू सबै ती मानिसहरू हुन् जो वास्तविक जीवनमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू सबै ती मानिसहरू हुन् जसले मानवताको कुरा त गर्छन्, तर भूतात्माहरूको प्रकृति बोकेर जिउँछन्। तिनीहरू सबै त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसले सत्यको कुरा गर्छन्, तर त्यसको साटो धर्मसिद्धान्तहरूमा जिउँछन्। वास्तविक जीवनमा सत्यताअनुसार जिउन नसक्नेहरू ती हुन् जसले परमेश्‍वरमा विश्‍वास त गर्छन्, तर तिनीहरूलाई उहाँले घृणा र अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तैँले वास्तविक जीवनमा प्रवेश गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, तेरा आफ्नै कमीहरू, अनाज्ञाकारिता, र अज्ञानतालाई जान्नुपर्छ, र तेरो असामान्य मानवता र कमजोरीहरूलाई जान्नुपर्छ। त्यसरी, तेरो ज्ञान तेरो वास्तविक अवस्था र कठिनाइहरूसँग जोडिनेछ। केवल यस प्रकारको ज्ञान मात्र वास्तविक हुन्छ र तँलाई वास्तविक रूपमा तेरो आफ्नो अवस्था बुझ्ने र स्वभाविक रूपान्तरण प्राप्त गर्ने तुल्याउन सक्छ।